Abaphuhlisi bePixelmator bezilungiselela into enkulu kangangeminyaka | Ndisuka mac
Abaphuhlisi bePixelmator bayakha into enkulu kangangeminyaka
Pixelmator Inye yesicelo sokumelwa kweMac ngezizathu ezininzi. Ukusukela ekukhululweni kwayo kuye kwayimbangi efanelekileyo kwi-Photoshop. Kodwa ayibonakali kuphela xa ithelekiswa nomhleli womfanekiso odumileyo. Olunye lweempawu eziphambili kuyilo lwayo, ngokwembono ye-Apple: ilula kunye ne-minimalist, kodwa ngaphandle kokulibala imisebenzi ephambili kuhlelo lwefoto okanye ukwakheka komfanekiso. Nditsho neApple uyibekile njengomzekelo wokudityaniswa kwayo ngokukhawuleza kunye neTouch Bar entsha. Kulungile lAbaqulunqi bomhleli wemifanekiso bebesenza ngokufihlakeleyo iApp entsha iminyaka.
Inyani yile yokuba isicelo besikwinqanaba lokuvuthwa ixesha elide. Umsebenzi owenziweyo kule minyaka idlulileyo unqunyelwe ekubandakanyeni imisebenzi ngexesha elifanelekileyo, kunye nokulungiswa okufanelekileyo kweempazamo, ukuyenza ibe ngakumbi nangakumbi.
Ngelishwa, sazi iinkcukacha ezimbalwa ngalo mzuzu. Kodwa bona ngokwabo bayavuma ukuba benze eyona "Mac" bayenzileyo ukuza kuthi ga ngoku. Intloko efanayo yophuhliso lwePixelmator, USaulius Dailide, uchaze kweyakhe blog:
Le yeyona nto inkulu esakha sayenza. Eyona nto intsha, intle kwaye inamandla into esakhe sayenza. Kwaye yeyona mveliso "yeyona Mac" sakha sayenza! Yile nto iqela elidumileyo kwiPixelmator eligcine liyimfihlo kule minyaka mihlanu inomdla wokusebenzisana
Ukufunda ezinye iiforamu, ezona zinto zidibanayo zizama ukubala Inkqubo yoyilo lobugcisa (okanye i-semi-professional) edibanise imifanekiso kunye nesicatshulwa. Kukho amarhe okuba iya kuba negama elithi "Graphiqhe", kodwa oko akuqinisekiswanga. Nditsho nabona banomdla kakhulu bahlalutye imifanekiso embalwa abafuna ukusibonisa yona ngaphaya kwekhethini ebomvu. Abanye bathi babona ibrashi phezu komfanekiso ofana nelogo yeefoto zeMac.
Siza kubona kwimihla embalwa elandelayo abasilungiselele yona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Abaphuhlisi bePixelmator bayakha into enkulu kangangeminyaka
UTim Cook ubongoza uDonald Trump ukuba angahambi kwisivumelwano sezulu saseParis
Ukucoca iDisk, ibha yemenyu yokuKhanya kunye nolunye usetyenziso ekuthengisweni ixesha elincinci